Fil d'actualités du 12/12/2019
12/12/2019 - 15:10 : FANATANJAHATENA:Lavon'ny Afrika Atsimo tamin'ny "tire au but"ny Barea Madagasikara sokajy U20 teo amin'ny lalao fiadiana ny manasadalan'ny COSAFA.
12/12/2019 - 14:30 : AMPASIMBAZIMBA-KAOMININA IBITY: Noraisim-potsiny tao an-tranony, taorian'ny fampitam-baovao avy amin'olon-tsotra, ireo dahalo roa niaraka tamin'ny basy vita gasy ny odigasy marobe.
12/12/2019 - 14:00 : TOE-KARENA:Ny fianakaviamben'ny Tahirimbolam-panjakana malagasy dia faly miarahaba an' Andriamatoa RANJALAHY Ihajambolatiana voatendry ho Tale Jeneralin'ny Tahirimbolam-panjakana vaovao, araky ny tolo-kevitry ny Minisitry ny Toe-karena sy ny Fitantanam-bola nandritry ny Filankevitry ny Minisitra omaly 11 desambra 2019.
12/12/2019 - 13:45 : FANATANJAHATENA:Mitarika 2-0 isaika malagasy amin'izao fotoana izao eo amin'ny lalao baolina kitra COSAFA U20.
12/12/2019 - 11:30 : FANAMBARANA:Manoloana ny feo miparitaka mahakasika ny fiakaran’ny vidin’entana (poketra, kiraro, kilalao, …) izay voalaza fa noho ny fiakaran’ny haban-tseranana, dia mitondra izao fanamarihana manaraka izao ny Foibem-pitantanan’ny Fadintseranana : • Ny tahan’ny haban-tseranana dia voafaritra amin’ny alalan’ny Lalana mifehy ny tetibolam-panjakana irery ihany. • Ny Fadintseranana dia tsy mikitikita taha anelanelan’ny taona ary tsy niova ny taha ny 01 january 2019 no nakaty. • Ny fiovanan’ny vidin’entana dia tsy miankina amin’ny Fadintseranana kanefa kosa maro ireo antony mety hahatonga izany toy ny fiakaran’ny vidin’ny entana any amin’ny mpamokatra na ny tombony alain’ny mpanafatra entana.
12/12/2019 - 11:00 : FANATANJAHATENA:Anio no hiatrika ny lalao manasa-dalana ny Barea cosafa U20 izay ihaona amin'ny bafana bafana,azoi lazaina ho lalao miverina ity lalao ity.
12/12/2019 - 10:30 : POLITIKA:Hisy ny dinika iharahin'ny solombavambahoaka sy ny praiminisitra Christian Ntsay anio etsy Tsimbazaza.
12/12/2019 - 10:00 : TOE-KARENA:Araka ny volavolan-kevitra naroson'ny minisitry ny fanajarina ny tany dia nolaniana nandritra ny filan-kevitry ny minisitra ny filazana ny filan'ny fanjakana ny toerana manemotra ny "voie rapide"mampitohy ny lalam-pirenena faharoa sy seranatsambon'ny Toamasina.
12/12/2019 - 09:30 : TSARA HO FANTATRA:Mitsingerina anio ny taona nahaterahan'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana,feno 70 taona anio ny tenany.Izahay eto amin'ny Tia Tanindrazana dia miarahaba manokana anao Atoa filoha.
12/12/2019 - 09:00 : JIRAMA:Fatampahan-jiro hoan'ny anio:Ampanotokana - Ambatomaro-Cité des assureurs Itaosy -Ivato - Antanetibe - Ambohiminono. Manomboka amin'ny 09 ora maraina ka hatramin'ny 5 ora ariva.
Archive du 20190108
Marc Ravalomanana “Ho avy eny amin’ny HCC aho”
Tsy dia re feo firy tao anatin’ny fotoana elaela ny kandida faha-25 Marc Ravalomanana. Niatrika ny lanonana fiarahabana noho ny fahatrarana ny taona 2019 teny amin’ny Lapam-panjakana Iavoloha ny tenany omaly.
Rivo Rakotovao Niantso fitoniana
Tontosa omaly alatsinainy 7 janoary ilay lanonam-panjakana fifampiarahabana noho ny taona vaovao, teny Iavoloha.
Fianakaviambe iraisampirenena Hihetsika rehefa olona tsy tiany no lany eo, hoy i Julien Radanoara
Ny fifidianana aty amin’ny tany an-dalam-pandrosoana dia misy tsy fahatomombanana foana, indrindra aty afrika, kanefa rehefa milamindamina ny zava-drehetra dia avoakany foana ny valim-pifidianana, hoy i Julien Radanoara, mpampianatra sady mpandalina politika.
Imbiky Herilaza « Tsy azo ihodivirana ny fanafoanam-bato… »
Tonga ihany ity ny talata 8 janoary 2019, fotoana nifanomezan’ny avy eo anivon’ny fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana ny vahoaka Malagasy hamoahany ny fanapahan-kevitra mikasika ny fifidianana ho filoham-pirenena, fihodinana faharoa, natao ny 19 desambra 2018 teo.
Praiminisitra Ntsay Christian Narary tampoka ?
Banga ny toerana natokana ho an`ny praiminisitra Ntsay Christian nandritra ny lanonana fifampiarahabana noho ny taona vaovao omaly alatsinainy 7 janoary teny Iavoloha.
CENI Efa tena mandranitra vahoaka…
Tsy dia nandrenesam-peo firy ny Vaomieram-pirenena momba ny fifidianana (CENI) taorian’ny 27 desambra namoahana amboletra ny valim-pifidianana na teo aza ny fangatahana ny tsy hanaovana izany aloha hahafahana manao fanamarinana sy fampitahana samihafa.
Valim-pifidianana ofisialy anio Handamina sa hanakorontana ?
Andro iray hanan-tantara ho an’ny firenena sy hamaritra ny hoavin’i Madagasikara anio talata 8 janoary 2018, fotoana hamoahan’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana (HCC) ny valiny ofisialy sy ny didim-pitsarana mikasika ny fifanolanana isan-karazany tamin’ny fifidianana filoha natao ny 19 desambra lasa teo.
Nampiaka-peo ireo minisitra TIM Tsy rariny ny ataon’ny mpitandro filaminana
Tsy rariny intsony ny zava-miseho ankehitriny, hoy ireo minisitra Tiako I Madagasikara (TIM) nanao fanambarana tetsy amin’ny minisiteran’ny Indostria Anosy omaly alatsinainy 7 janoary, nahitana an’i Guy Rivo Randrianarisoa (Indostria sy fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina),
Mbola Rajaonah ”Tsy maintsy mandroso isika”
Hatreto, tsy mbola manan-kambara, hoy i Mbola Rajaonah, filoha tale jeneralin`ny orinasal RLM mahakasika ny fandoroana ny orinasany ny alatsinainy lasa teo.
Firaisankinan’ny Sendika eto Madagasikara Manameloka ny fampiasan-kery ataon’ny mpitandro ny filaminana
Fampiasana fitaovam-panjakana sy fampiasan-kery no misy amin’izao fotoana izao, hoy ny firaisankinan’ny sendika eto Madagasikara. Afaka mandray andraikitra ny amin’izay mihoa-pefy ny tafika, hoy izy ireo fa tsy ekena kosa ny fandefasana baomba mandatsa-dranomaso maro be toy ny misy amin’izao fotoana.
Maka Alphonse “Ny fampihavanana no lehibe indrindra”
Nitondra ny heviny mahakasika ny kabary firarian-tsoa nataon`ny Filoham-panjakana, Rivo Rakotovao, i Maka Alphonse, filohan`ny Komitin`ny fampihavanana Malagasy (CFM).
CRN Mahajanga « Tsy tokony hanan-kery ny valim-pifidianana teo ! »
Marihiko, hoy ny filohan’ny komitin’ny fampihavanam-pirenena ao Mahajanga, Philémon, fa ny CRN dia tsy miandany amina kandida ho filoham-pirenena.
Fikirakirana ny voka-pifidianana Nanitrikitrika ny HCC fa tsy mitanila
Toy ny tamin’ny fihodinana voalohany, dia nikirakira avy hatrany ny ireo antontan-taratasim-pifidianana voaray avy tamin’ny SRMV na ny CENI ny HCC nanamarinana ilaina amin’ireo fitanana an-tsoratra (PV) sy ny taratasin-datsabato, hoy ny fanamarihana navoakany omaly.
Lalaina Berthnes ‘’Fotoana ifampidinihana izao.”
Mafampana ny toe-draharaham-pirenena ka dia samy maneho ny heviny ny ankamaroan’ireo mpanao politika.
Fahamaizan ‘ny RLM Communication Mampatsiahy ny “Lundi noir”
May kila forehitra ny marainan’ny omaly alatsinainy 7 janoary ny foiben'ny vondron’orinasan-tserasera RLM Communication etsy Ankorondrano.
Joseph d’Af Tapa-kevitra ny hanambady
Ela ny ela fa nahita ny silam-panahiny i Joseph d’Af, ilay tovolahy mpihira ara-pilazantsara tsy zoviana amintsika intsony.
Rabibisoa Ansèlme Tokony hifantoka amin’ny taninketsa isika
Marina fa maro nahatratra 213 ireo atleta Malagasy mendriky ny taona 2018 no notoloran’ny filoha mpisolo toerana, Rivo Rakotovao,
Ligin’ny baolina kitra Atsimo Andrefana Ekipa 10 no handray anjara amin’ny « Championnat ligue 1 »
Hotontosaina ao amin’ny kianja Maître Kira ao Andaboly Toliara amin’ny zoma 11 janoary 2019 ny fanokafana ofisialy ny fiadiana ny ho tompondakan’ny Ligue 1 ao amin’ny ligin’ny baolina kitran’Atsimo Andrefana.
Fehezan-dalàna mifehy ny fitaterana an-dranomasina Efa tena lany daty ny an’i Madagasikara
Nanatanteraka atrikasa nasionaly tetsy amin’ny hotely Sakamanga Antsahavola omaly alatsinainy 7 janoary ny minisiteran’ny fitaterana sy ny famantarana ny toetr’andro miaraka tamin’ny antokon-draharaha misahana ny fitaterana an-dranomasina sy ny ranomamy (APMF).
Tobim-piantsonana Andohatapenaka Maina ny karama, velon-taraina sahady ny koperativa
Velon-taraina ny amin’ny tsy fisian’ny karama sahady ireo mpitatitra mihazo ny faritra etsy amin’ny toby fiantsonana Andohatapenaka. Raha ny fanadihadiana natao dia zara raha mahalasa fiara iray isan’andro ny koperativa iray, indrindra fa ny mianavaratra toy ny mihazo an’Ambilobe, Ambanja, Antsohihy.
ORINASA AFAKA HABA
Vao manomboka ny taona dia nitokona sahady ny orinasa afaka haba iray etsy amin’ny Forello-Tanjombato.
Raharaha Lercia-Socimex Tsy noraharahiana ny PIL
Voatery nametraka fitoriana eny amin’ny fitsarana indray ny tenako tamin’ny 06 desambra 2018 teo, hoy Atoa Lercia mpandraharaha, amin’ny olana hifanolanako amin’ny orinasa Socimex satria na dia efa namoahan’ny minisiteran’ny fitsarana PIL « Le Pouvoir dans l’Intérêt de la Loi »